Wasiirka Arrimaha Gudaha oo la kulmay Guddiga madaxa banaan ee xuduudaha (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) aya maanta la kulmay xubno ka tirsan Guddiga madaxa banaan ee Xuduudaha.
Kulankan ayaa looga hadlay dar dar gelinya howlaha hor-yaalla Guddigan, iyadoo howsha ugu weyn ee laga sugayo ay tahay xadeynta Gobollada dalka ee uu ka jiro muranada xaga xuduudka.
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa warbixin ka dhageystay Guddiga xuduudaha, oo ku aadan sida ay u howl galayaan iyo gudashada waajibaadka loo igmaday.
Mr Odawaa ayaa hoosta ka xariiqay in Wasaaraddu ay diyaar u tahay la shaqeynta guddiga madaxa banaan ee xuduudaha, isla markaana ay garab taaganyihiin.
Xubnaha Guddiga ayaa sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan howlahooda, waxaana ay tilmaameen in waajibaadkooda yahay sidii umadda Soomaaliyeed ay si cadaalad ugu shaqeyn lahaayeen.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ayaa horay u soo magacawday Guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha, kaasoo uu meel mariyay Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana Wasaaraddu sheegtay in howl gelinta guddiyadan madaxa banaan uu qeyb ka yahay dhaqan gelinta barnaamijka Hiigsiga sanadka 2016 oo qorshuhu yahay in la dhiso dhamaan